फेसवुकमार्फत धारणा राखे नेकपाका नेता इश्वर पोखरेलले::Online News Portal from State No. 4
फेसवुकमार्फत धारणा राखे नेकपाका नेता इश्वर पोखरेलले
भन्छन - अभ्यास र आदत एकातिर, अवस्था र आवश्यकता अर्कोतिर !
बागलुङ, २६ माघ – पार्टी अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन मिडियामा आफ्ना विचारहरु सार्वजानिक गरिरहदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरुमा एक किसिमको अन्योलता छाएको छ । के वोल्ने के नवोल्ने उनीहरुमा दोधार देखिन्छ । यसैसन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पाेखरेलले वर्तमान सन्दर्भ र पार्टी एकताका बारेमा आफ्नाे धारणा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन । शनिवार विहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता पाेखरेलले वर्तमान परिस्थिति र पार्टी एकताकाे सन्दर्भमा आफ्नाे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले फेसवुकमा लेखेका छन् :
परिस्थिति र पार्टी एकताका सम्दर्भमा :
– अहिले सरकार मात्र परिवर्तन होइन, प्रणाली परिवर्तन भएको हो । यसको संवैधानिक र राजनीतिक घोषणा त भयो – तर त्यस अनुरूप कानून र संरचनाहरू परिवर्तन वा अद्यावधिक भैसकेका छैनन् । गरिदैछन्- हुँदैछन् । अहिलेको यो स्थितिले एउटा अन्तर्विरोध देखिदैछ । अभ्यास र आदत एकातिर अवस्था र आवश्यकता अर्कोतिर ।
– सरकार मात्र परिवर्तन होइन, शासन सत्ताको माथिल्लो तह परिवर्तन भएको हो । स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश तहका सरकार र संघीय सरकारमा कम्युनिष्टहरूले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा घोषित रूपमा दुई तिहाइ हैसियत प्राप्त गर्नुले यसलाई स्पष्ट पारेकोछ । तर यसलाई स्वीकार गर्न र पचाउन नसक्ने देशभित्र र बाहिर थुप्रै छन् । त्यस्ता धेरैको मन मुटु भत्भती पोलिरहेको छ । त्यस्ताहरूले अहिलेको विकसित स्थितिलाई पचाउन सकिरहेका छैनन् र हातमा पुल्ठो बोकेर झोस्न/डढेलो सल्काउन ज्यान फालेर लागेका छन्, पुल्ठो झोस्ने ठाउँहरू खोज्दैछन् । त्यस्तासित होशियार बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । र, यो होशियारी नीतिमा, कार्यक्रममा, योजनामा र आचरणमा देखाउनु जरूरी छ । आमरूपमा आउने गरेका|उठ्ने गरेका प्रश्नहरू, जिज्ञासा, आशंका र आक्रोशलाई तिनै मार्फत जवाफ दिनु जरूरी छ । धेरै उत्कृष्ट लाग्ने राम्रा कुराहरू बोलेर भन्दा पनि एउटा सरदर राम्रो काम गर्दै अगाडि बढ्नु जरूरीछ ।
(२) दुइटा कम्युनिष्ट पार्टी विचको एकता :
– यो एकता कम्युनिष्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूको चाहना, कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आशा अपेक्षा गर्ने आम नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतामा आधारित छ । एकताका सन्दर्भमा यी मूलत: भावनात्मक पक्ष हुन् । एकतासित गाँसिएको सार पक्ष भनेको विचारको पक्ष , संगठनात्मक संरचनाको पक्ष र नेतृत्वको पक्ष हो । एकताको घोषणा गरिरहँदा यी विषयमा त्यति गहिराइका साथ छलफल हुन सकेन । अब सिंगो पार्टी पंक्तिले यी विषयलाई गंभीर महत्वका साथ लिदै छलफल वहस गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जरूरी छ ।
एकताको घोषणा गरिरहँदा सकारात्मक र सार्थक वहस र छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ । आफ्नै देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विकसित भएको , अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवहरूको निर्मम समीक्षाबाट निकालिएको निष्कर्ष बोकेको र दर्शन तथा सिद्धान्तले निर्देशित सुसंगत विचारको श्रृंखला बोकेको कम्युनिष्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता हो । यस मामिलामा अलमलिएर वा यसमा ‘ग्रे एरिया ‘ राखेर कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्तैन ।
आज नेकपा ( एमाले) र माओवादी केन्द्र विच भएको ऐतिहासिक एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले यही बाटो हिंड्नुपर्छ । चुनौतीपूर्ण अभिभारा पुरा गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा उभिएका कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले योग्यतापूर्वक यो काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् – यसैमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिंगो मुलुकको भविष्य गाँसिएको छ । टुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि जानेका छन् भनेर आफ्नो परिचय बनाएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आगामी दिनमा यो ऐतिहासिक अभिभारालाई योग्यतापूर्वक पुरा गर्नेछन् ।